Ihe ịrịba ama nke mmasị n'etiti ndị ọrụ ọrụ | Ndị nwoke mara mma
Ihe ịrịba ama nke mmasị n'etiti ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ
Alicia tomero | 29/05/2022 10:34 | Di na Nwunye na Mmekọahụ
Ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ nwere ike ịnye nkọwa ụgha iji mara mgbe nwoke ahụ masịrị gị na-amasị gị. Mgbe nwoke nwere mmasị na nwanyị na-enye ihe ịrịba ama doro anya, ma ihe ịrịba ama nke mmasị n'etiti ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ nwere ike ịdị oke n'ihi na ọgwụgwọ kwa ụbọchị nwere ike iduhie.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ndị ọrụ ọ nwere ike ịghọ ebe kwesịrị ekwesị ịhụ onye ahụ masịrị gị na mara ya nke ọma. Ebe ahụ dị mma, ma ọ bụ karịa mgbe ị na-aga izute ndị mmadụ n'ebe dị ka ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Mana buru ụzọ mara nke ọma ma mmadụ abụọ a nwere mmasị na ibe ha.
1 Ọdịdị ahụ na-adịgide adịgide
2 Mgbe ha hụrụ ibe ha, ha na-amụmụ ọnụ ọchị
3 Ekele adịghị ụkọ
4 Lezienụ anya ka ị weta kọfị
5 Ha na-aga irikọ nri ehihie
6 A na-ahụ romp na-adọrọ adọrọ n'etiti ha
7 Ha na-adaba n'ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ nke ọrụ
8 omume na-adịghị ahụkebe
Ọdịdị ahụ na-adịgide adịgide
Enweghị ihe akaebe ka mma ma hụ nke ahụ Nlegharị anya na-aga n'ihu na ugboro ugboro. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ha na-achị ọchị, na-achị ọchị ma na-emetụ ibe ha aka. Ọdịdị ahụ aghaghị ịmasị mmasị, ọ bụghị ọdịdị nkịtị, ma a na-ahụ ya otú onye nke ọzọ ọ na-ele anya n’amaghị ya.
Lezienụ anya ike nke anya ahụ ma ọ bụrụ na mgbakwunye na ha nwere ike ijide n'aka na ha nwere ike ọbụna tụgharịa isi n'ihi na otu ejidela nke ọzọ mgbe ọ na-ekiri ya. Enwere ike iburu okwu a n'uche mgbe ịchọrọ inyocha ma ọ bụrụ na ọ dị onye na-arụ ọrụ nke masịrị gị.
Ọ bụrụ na ihe ndị a emee, ị ga-enye ya nke a pụtara na ọ masịrị gị. Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-ele anya, ọ nwere ike ịbụ na-achọ oge egwu, n'ihi na ọ bụ onye nwere obi ike na onye siri ike.
Mgbe ha hụrụ ibe ha, ha na-amụmụ ọnụ ọchị
Ọ bụghị naanị nlele nzuzo ndị ahụ ọzọ, mana ha ga-ahụ ka otu ihu si agba ọkụ ma ọ hụ ibe ya, na ọbụna enweghị ike ịnwụ kama ịmụmụ ọnụ ọchị. Mgbe onye mmekọ masịrị gị, doro anya agaghị akwụsị ịmụmụ ọnụ ọchị oge ọ bụla mụ na gị na-akpakọrịta.
Ekele adịghị ụkọ
E nwere ọtụtụ ndị na-amasị ndị ọzọ ịdị mma, na ọbụna ndị ọrụ ibe. Ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga na-arụ ọrụ dị jụụ na inwe mmetụta n'ịdị n'otu. Ma ọ nwere ike ime na otu n'ime ndị mmekọ mgbe niile gosi otutu otuto na otuto kwupụta otu onye.
Ihe ngosi nke ịhụnanya nwere ike ịdị, ọ pụtara ìhè, ma mgbe ọ na-ebufe ihe karịrị àgwà dị mfe mgbe ahụ a ghaghị iwere ya. dị ka ihe na-enyo enyo. N'ọtụtụ ọnọdụ, ịja mma agaghị adị mkpa, ma mgbe ọ na-egosi na ị nweghị ike mechie ọnụ wee kwuo ya, ọ na-egosi na ị nọ.na-enwe mmasị dị ukwuu.
Lezienụ anya ka ị weta kọfị
Ọ nwere ike ịbụ kọfị, mmanya chocolate, obere achicha, nri nri, ma nke bụ eziokwu bụ na obere nkọwa ahụ ọ bụ naanị otu onye nwere ya. Ọ dịghị onye ọrụ ibe na-anata obere onyinye ahụ ma ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-enyo enyo.
Ha na-aga irikọ nri ehihie
N'etiti ndị ọrụ ibe ọ nwere ike ịhụ na site n'oge ruo n'oge ha na-aga nri ehihie ọnụ, ma mgbe ha na-apụ mgbe niile ọ bụ ihe ịrịba ama doro anya na ihe na-eme. Ọ bụrụgodị na i meghị ya n’oge nri ehihie n’ihi na otu onye n’ime unu nwere nzukọ, ị ga-ahụ otú onye nke ọzọ na-esi ege ntị. wetara ya nri ehihie nke a na-ewerebeghị.
A na-ahụ romp na-adọrọ adọrọ n'etiti ha
Igwuri egwu bụ isi ihe, ebe ha na-eche ịmụmụ ọnụ ọchị n'ọnọdụ ọ bụla. Na nke ọ bụla n'ime oge ndị a ọ bụghị naanị okwu, ma kọntaktị ọkụ, mgbe ụfọdụ ọbụna ịhụnanya na ndị aka ha dị ọcha. Enwere ike kpee ya ikpe naanị site n'ụzọ ị na-akpa àgwà n'ebe ndị ọrụ ibe gị nọ, n'ihi na nke a bụ otú ọ ga-esi ekpebi gị.
Ha na-adaba n'ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ nke ọrụ
Ọ bụ ihe ndaba na ya Mmadụ abụọ na-abanye ma ọ bụ na-ahapụ ọrụ n'otu oge. Ọ na-emekwa n'oge ezumike ọ bụghị naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu, ma a na-ahụ na ha na-eme ya kwa ụbọchị.
omume na-adịghị ahụkebe
Ọ bụ naanị ilele ka onye ọ bụla n'ime ha si eme omume nkọwa ndị na-egosi na ha nwere mmasị n'ebe ibe ha nọ. Ị nwere ike ịhụ ka ụfọdụ n'ime ha siri nwee ike ịmalite idozi onwe ha karịa, ọbụna tinye ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ.
Mgbe ha na-arụ ọrụ ị nwere ike ịhụ ka ahụ nke ụfọdụ n'ime ha na-atụgharị na nke ọzọ mgbe niile. Ọbụna hụ ma ọ ga-eme mmetụta mirror n'etiti abụọ. Nke a pụtara na mgbe otu n’ime ha na-eme ihe ụfọdụ, dị ka ihe atụ, imetụ ntutu isi ha aka, onye nke ọzọ na-eṅomi ihe onye nke ọzọ mere n’amaghị ama.
N'ikpeazụ, ịmara ma ọ bụrụ na mmadụ abụọ na-amasị ibe ha na-arụ ọrụ doro anya site na usoro nkọwa nke anyị nyochara. Ọtụtụ n'ime ha ga-adabarịrị ka ọ pụta ìhè. Ma eziokwu na ha na-amasị onye ọ bụla ọzọ na ịhụ onwe anyị kwa ụbọchị pụrụ iduga n'ọtụtụ esemokwu na esemokwu, ebe ọ bụ na ịhụnanya a na-ahazi n'ebe ọrụ pụrụ ịdị mgbagwoju anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Dabara » Di na Nwunye na Mmekọahụ » Ihe ịrịba ama nke mmasị n'etiti ndị ọrụ na-arụkọ ọrụ
Ọnọdụ maka oge okpomọkụ a 2022
Otu esi ejikọta akpụkpọ ahụ na akwara